mini-miti inoshandisa mafuta motori matairi
PROJECT "PROMETHEUS" - kugamuchira tsvina nemaminerari emidziyo yemafuta petroleum.
Technologies zvirongwa zveK KB Klimov pakuwana mafuta akakwirira>>VERENGA IZI<<
Izvi ndizvo zvinoshandiswa mumarara mumaguta asati apinda mu "golide dema", ndokubva apinda mune dizeli.
Icho chiyero chemarara mumaguta iwe unoda kutenga 1 litre yemwenje inoita mafuta. Mafuta anovhenekera, ane makumi mapfumbamwe ezana makumi matatu (80%) edielisi distillate.
Iye zvino kwose kwose vanofarira kukura mumarara akadaro mumarara emarara, uye kwete kuti vadzokere zvakare. Uye chaizvoizvo, 10 kilogram yemarara pazuva - uye imwe purazi inowanikwa zvakakwana nemagetsi uye kupisa.
Kusvika iye zvino, 1 tani yemarara inogona kuunza mushanduri 500 madhora emari inowanikwa. Fungidzira zvinoita kuti guta duku rive nevagari venguva 200 000, vachiviga matani 1 000 emarara zuva nezuva pamigwagwa yacho. Vagari vomuguta rino vanokanda kunze $ 500 000 zuva rimwe nerimwe.
VERENGA ZVAKAWANDA >>>
"POTRAM" inogadzirisa KUTONGA KWENYIKA PAMUSORO PAKUSINZWA KWENYIKA
Kubatsira kwe "POTRAM" yakaoma inoreva "omnivorousness". Pamusoro pemarara yakasimba, mazimbe, peat, mafuta sludge, matanda ematanda, motokari yakashandiswa nemafuta emabhizimisi, kushamba kwetangi rezvitima, huni, matanda emvura, lignin, cellulose, mashizha ezvirimwa, mafuta asina mafuta, mafuta ane mafuta, nzara distillates mafuta, asphalt, bitumen, akapfeka matairi, mapepa emvura, sewage sludge.
Mhando dzose dze "POTRAM" zvinokonzerwa nekushambadzira uye kugamuchira kwezvinhu zvinotengesa.
Complexes "POTRAM" yekutapudza kushandiswa.
Dyara "PROMETHEUS-FARMER" yekugadzirisa chero upfumi hwekurima. >>>VERENGA ZVAKAWANDA<<<
Complexes "POTRAM" yekushandiswa kwemarara yakasimba. >>>VERENGA ZVAKAWANDA<<<
Complexes "POTRAM" yekugadzirisa pasi-calorie yakawanda emarasha.>>>VERENGA ZVAKAWANDA<<<
Complexes "POTRAM" yekugadzira peat.>>>VERENGA ZVAKAWANDA<<<
Dyara "PROMETEY" yekugadzira matanda (lignin) mumafuta nemafuta (code 1200/03). >>>VERENGA ZVAKAWANDA<<<
Complexes "POTRAM" yekushandiswa kwematairi uye rubha. >>>VERENGA ZVAKAWANDA<<<
Complexes "POTRAM" yekugadzira mafuta sludge. >>>VERENGA ZVAKAWANDA<<<
Complexes "POTRAM" yekugamuchira mabhizimisi anotengesa.
Complexes "POTRAM" yekuwana mafuta uye mafuta. >>>VERENGA ZVAKAWANDA<<<
Complexes "POTRAM" yekugadzirwa kwe coke pellets. >>>VERENGA ZVAKAWANDA<<<
Dyara "PROMETHEUS" yekutengesa gesi (tsamba 1400)>>>VERENGA ZVAKAWANDA<<<
Dyara "Prometheus" kuunza magetsi (tsamba 1500)>>>VERENGA ZVAKAWANDA<<<
Complexes "POTRAM" yekushandiswa kwemafuta anoshandiswa, mafuta emafuta, zvigadzirwa zvine mafuta zvinokonzerwa nefuta dizeli. >>>VERENGA ZVAKAWANDA<<<
Chigadzirwa chemafuta emabhizimusi Klimov Design Bureau "PROMETHEID-OIL" (nhamba 3000). >>>VERENGA ZVAKAWANDA<<<